ဗိုလ်ထက်မင်း | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 5
ဗိုလ်ထက်မင်း – တပ်မတော်ရဲ့ အမျိုးသားနိုင်ငံရေး စစ်မှန်သွားရေး တိုက်တွန်းချက် အပိုင်း(၁) (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၅ ၁။ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိူင်က တပ်မတော်ဟာ...
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန အရှေ့အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ရေးရာ လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ ။ နေပြည်တော် ၊ နိုဝင်ဘာ ၂၄ ဗိုလ်ထက်မင်း – စိန်ခေါ်မှူတွေရှိနေတဲ့ အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေး တိုက်တွန်းချက်...
ဗိုလ်ထက်မင်း – စိန်ခေါ်မှူတွေရှိနေတဲ့ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးတိုက်တွန်းချက် – အပိုင်း (၃)
ဗိုလ်ထက်မင်း – စိန်ခေါ်မှူတွေရှိနေတဲ့ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးတိုက်တွန်းချက် – အပိုင်း (၃) (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၂၃၊ ၂၀၁၅ ၁၁။ ဘင်္ဂလီကိစ္စကြောင့် မျိုးစောင့်ဥပဒေပေါ်လာတာဖြစ်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ဒုတိယအင်အား အကြီးဆုံးစိန်ခေါ်မှု ဖြစ်ပါတယ်။ ပါတီက...
(တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များ၏ ပန်စမ်းတွေ့ဆုံပွဲ၊ ၂၀၁၅၊ နိုဝင်ဘာ၊ ဓာတ်ပုံ – ဧရာဝတီ) ဗုိုလ်ထက်မင်း – စိန်ခေါ်မှူတွေရှိနေတဲ့ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး တိုက်တွန်းချက် – အပိုင်း (၂) (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၅...
ဗိုလ်ထက်မင်း – စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေတဲ့ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး တိုက်တွန်းချက် – အပိုင်း (၁)
2015 April – file photo ဗိုလ်ထက်မင်း – စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေတဲ့ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး တိုက်တွန်းချက် – အပိုင်း (၁) (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၁၉၊ ၂၀၁၅ ၁။ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကြောင့်...
ဗိုလ်ထက်မင်း – NCA လက်မှတ်ထိုးတဲ့အရေး အသွင်မတူတဲ့ အမြင်များ ကောက်နှုတ်ကြည့်ခြင်း – အပိုင်း (၅) ၊ နိဂုံးချုပ်
ဗိုလ်ထက်မင်း – NCA လက်မှတ်ထိုးတဲ့အရေး အသွင်မတူတဲ့ အမြင်များ ကောက်နှုတ်ကြည့်ခြင်း – အပိုင်း (၅) ၊ နိဂုံးချုပ် (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၃၊ ၂၀၁၅ ၃၉။ NCA...
အောက်တိုဘာ ၁၆၊ ကယားပြည်နယ်၊ မော်ချီးနယ်မှာ တွေ့ရတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ သမ္မတကြီး သိန်းစိန် ဗိုလ်ထက်မင်း – NCA လက်မှတ်ထိုးတဲ့အရေး၊ အသွင်မတူတဲ့ အမြင်များ ကောက်နုတ်ကြည့်ခြင်း – အပိုင်း(၄) (မိုးမခ)...
Myanmar’s President Thein Sein (C, with yellow ribbon) greets international witnesses after the signing ceremony of the Nationwide Ceasefire...
ဗိုလ်ထက်မင်း – NCA လက်မှတ်ထိုးတဲ့အရေး၊ အသွင်မတူတဲ့ အမြင်များ ကောက်နုတ်ကြည့်ခြင်း – အပိုင်း( ၂) (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၂၂ ၊ ၂၀၁၅ ၁၀။ NCA လက်မှတ်ထိုးပွဲမှာ...
ဗိုလ်ထက်မင်း – NCA လက်မှတ်ထိုးတဲ့အရေး၊ အသွင်မတူတဲ့ အမြင်များ ကောက်နုတ်ကြည့်ခြင်း – အပိုင်း(၁) (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၁၉ ၊ ၂၀၁၅ ၁။ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲပြီးတာ့ ရွေးကောက်ပွဲကာလနဲ့ ...
Senior General Min Aung Hlaing – facebook ဗိုလ်ထက်မင်း – ဘာကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေး နီးလျှက်နဲ့ဝေးနေရတာလဲ – အပိုင်း(၅)၊ နိဂုံးချုပ် (မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၅...
ဗိုလ်ထက်မင်း – ဘာကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေးနီးလျှက်နဲ့ဝေးနေရတာလဲ – အပိုင်း (၄)
ဗိုလ်ထက်မင်း – ဘာကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေးနီးလျှက်နဲ့ဝေးနေရတာလဲ – အပိုင်း (၄) (မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၅ ၂၆။ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိူင်ဟာ သမ္မတနဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲ...
ဗိုလ်ထက်မင်း – ဘာကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေး နီးလျှက်နဲ့ဝေးနေရတာလဲ – အပိုင်း(၃)
Senior General Min Aung Hlaing Facebook ဗိုလ်ထက်မင်း – ဘာကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေး နီးလျှက်နဲ့ဝေးနေရတာလဲ – အပိုင်း(၃) (မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၅ ၁၅။ အရှေ့မြောက်ဒေသမှ...
ဗိုလ်ထက်မင်း – ဘာကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေးနီးလျှက်နဲ့ဝေးနေရတာလဲ – အပိုင်း (၂)
ဗိုလ်ထက်မင်း – ဘာကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေးနီးလျှက်နဲ့ဝေးနေရတာလဲ – အပိုင်း (၂) (မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၂၃၊ ၂၀၁၅ ၈။ ကိုးကန်ဒေသစစ်ပွဲဖြစ်စဉ်ကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိူင်နဲ့ တရုတ်တပ်မတော်စစ်ကော်မရှင် ဒုဥက္ကဌနဲ့ ဆက်ဆံရေး သိပ်အဆင်ပြေလှတယ်မဟုတ်ဘဲ အစိုးရ၊...
ဗိုလ်ထက်မင်း – ဘာကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေးနီးလျှက်နဲ့ဝေးနေရတာလဲ – အပိုင်း(၁)
ဗိုလ်ထက်မင်း – ဘာကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေးနီးလျှက်နဲ့ဝေးနေရတာလဲ – အပိုင်း(၁) (မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၂၂၊ ၂၀၁၅ ၁။ NCA လက်မှတ်ထိုးဖို့အစိုးရက ဆန္ဒ ပြင်းပြကာအရှိန်ယူနေပြီဖြစ်တယ်။ ဦးအောင်မင်းဦးဆောင်တဲ့ UPWC အဖွဲ့တွေ ကျိုင်းတုံကို...
ဗိုလ်ထက်မင်း – ကိုးကန့် MNDAA စခန်းတွေကို တိုက်ပြီးရင် ဘာဆက်လုပ်ကြမှာလဲ ? အပိုင်း(၁)
Photo – 7Days Daily, Feb 16th 2015, File Picture ဗိုလ်ထက်မင်း – ကိုးကန့် MNDAAစခန်းတွေကို တိုက်ပြီးရင် ဘာဆက်လုပ်ကြမှာလဲ ? အပိုင်း(၁) (မိုးမခ)...
ဗိုလ်ထက်မင်း – ငြိမ်းချမ်းရေးမြတ်နိုးရင် တပ်မတော်သားများကို ဘာကြောင့် အဓမ္မ စစ်တိုက်ခိုင်းနေရတာလဲ? နိဂုံးချူပ် အပိုင်း ၇
ဗိုလ်ထက်မင်း – ငြိမ်းချမ်းရေးမြတ်နိုးရင် တပ်မတော်သားများကို ဘာကြောင့် အဓမ္မ စစ်တိုက်ခိုင်းနေရတာလဲ? နိဂုံးချူပ် အပိုင်း ၇ (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၅၊ ၂၀၁၅ ၁။ ငြိမ်းချမ်းရေးမြတ်နိုးရင် တပ်မတော်သားများကို ဘာကြောင့် အဓမ္မစစ်တိုက်ခိုင်းနေရတာလဲခေါင်းစဉ်ပါ...
ဗိုလ်ထက်မင်း – ငြိမ်းချမ်းရေးမြတ်နိုးရင် တပ်မတော်သားများကို ဘာကြောင့် အဓမ္မ စစ်တိုက်ခိုင်းနေရတာလဲ? ၆
ဗိုလ်ထက်မင်း – ငြိမ်းချမ်းရေးမြတ်နိုးရင် တပ်မတော်သားများကို ဘာကြောင့် အဓမ္မ စစ်တိုက်ခိုင်းနေရတာလဲ? ၆ (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၃၊ ၂၀၁၅ ၁။ တပ်မတော် ယန္တယားအဆောက်အဦး ရွှေကျောင်းပြောင်ပြောင် ဝမ်းခေါင်ခေါင်...
ဗိုလ်ထက်မင်း – ငြိမ်းချမ်းရေးမြတ်နိုးရင် တပ်မတော်သားများကို ဘာကြောင့် အဓမ္မ စစ်တိုက်ခိုင်းနေရတာလဲ? ၅
ဗိုလ်ထက်မင်း – ငြိမ်းချမ်းရေးမြတ်နိုးရင် တပ်မတော်သားများကို ဘာကြောင့် အဓမ္မ စစ်တိုက်ခိုင်းနေရတာလဲ? ၅ (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၀၊ ၂၀၁၅ ၁။ ယနေ့အချိန်ကာလက အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကို ဇောင်းပေးပြီး တနိုင်ငံလုံး ငြိမ်းချမ်းရေး ဖေါ်ဆောင်နိုင်ဖို့...
ဗိုလ်ထက်မင်း – ငြိမ်းချမ်းရေးမြတ်နိုးရင် တပ်မတော်သားများကို ဘာကြောင့် အဓမ္မ စစ်တိုက်ခိုင်းနေရတာလဲ? – ၄
ဗိုလ်ထက်မင်း – ငြိမ်းချမ်းရေးမြတ်နိုးရင် တပ်မတော်သားများကို ဘာကြောင့် အဓမ္မ စစ်တိုက်ခိုင်းနေရတာလဲ? – ၄ (မိုးမခ) ဧပြီ ၈၊ ၂၀၁၅ ၁။ တပ်မတော်(ကြည်း) ဗိုလ်သင်တန်းကျောင်း (ဗထူး) ဗသကရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ထဲက...